rehefa dia ny manga casino chip fanokafana
rahoviana no fotoana tsara indrindra mba handresy ny vola tao amin'ny casino
elk grove lanitra renirano casino
elk grove vaovao casino daty fanokafana
Na izany aza, ny Fiangonana Katolika Romana, ankoatra ny hafa ny vondrona ara-pivavahana, dia mifanohitra amin'ny casino tolo-dalàna ary nilaza fa tokony ny drafitra ho an'ny casino ho mahomby, ny fiangonana dia tsy misy intsony hanolotra ny Fanahy-Bahoaka ao amin'ny Limketkai toeram-Pivarotana lehibe rehefa ny casino handeha misokatra ao ohio.
Ny orinasa ny taratasy avy amin'ny Filan-kevitry ny Tanàna tamin'ny janoary nangataka ny filankevi-nitranga ny fanapahan-kevitra "naneho [ny] ho fanohanana sy tsy nanakana ny tetikasa", araka ny tatitra. Limketkai Lahy Inc.dia ny developer ny Limketkai Foibe, izay manarona ny 25 hektara ary dia hita ao afovoan-Cagayan de Oro Tanàna ao amin'ny faritanin'i Misamis Tatsinanana, Philippines, ary an-trano ny lehibe indrindra amin'ny lisitry ny sarotra ao Avaratry ny Mindanao rehefa dia ny manga casino chip fanokafana. Miandrandra ny hafa mba hanaraka ny ohatra omeny, ary koa ny handroso rahoviana no fotoana tsara indrindra mba handresy ny vola tao amin'ny casino.
Ny fomba Fiaina Lampihazo trano no voalaza fa tokony ho vita amin'ny volana janoary manaraka ny taona. elk renirano poker mihazakazaka 2021. Lefitry ny Ben'ny tanàna Rainier Joaquin Uy voalaza fa evasive rehefa hijoro eo an-azo atao ny fanokafana ny filokana-toerana no nametra-panontaniana elk grove lanitra renirano casino.
Ao an-toerana masoivohom-baovao SunStar mitatitra fa Ocon nahazo antso avy amin'ny olona iray izay naneho fahalianana amin'ny casino tolo-kevitra fa tsy hanambara ny momba ilay mpiantso. Drafitra ho an'ny tolo-casino tao an-tanànan'i Cagayan de Oro any Filipina dia miteraka tombontsoa mihoatra noho ny an'ireo Limketkai sy ny Zanany, Inc., hoy Tanàna Mpanolotsaina Zaldy Ocon ny alatsinainy. Araka ny masoivohom-baovao, Uy hoy ihany fa izy no manohana ny fampandrosoana izay mahasoa ny vahoaka, fa izy koa dia nanome voninahitra ireo izay manohitra ny volavolan-dalàna elk grove vaovao casino daty fanokafana. Ny orinasa dia mikasa hanorina casino ao anatin'ny ara-barotra sarotra izay mety mitana ny manontolo rihana faharoa ny fomba Fiaina Lampihazo trano amin'izao fotoana izao eo ambany ao anatin'ny fanorenana ny Foibe. Araka ny tatitra, Ocon, izay seza ny kaomitin'ny lalao sy ny voly, dia nilaza fa tampoka liana amin'ny vondrona hafa dia tsy mahagaga izany satria ny Filan-kevitry ny Tanàna no nanao ny hetsika hahatonga ny fampiharana ny casino tolo-kevitra natao ho an'ny rehetra.